Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee eTN | eTurboNews | Wararka Safarka
Bogga ugu weyn » Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee eTN
eTurboNews, Inc (eTN) waxay daabacdaa Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Internetka si ay kuugu wargaliso dhaqammadayada ku saabsan ururinta iyo adeegsiga macluumaadka aad naga siiso isdhexgalka websaydhkan iyo websaydhada kale ee xiriirka la leh eTN. Siyaasaddan laguma dabaqi karo macluumaadka ay soo uruuriyaan habab kale ama ay kontoroolaan heshiisyada kale.
Sida Aan U Ururino Xogta
eTN waxay uruurisaa macluumaadka shakhsiga ah siyaabo kala duwan, oo ay ka mid yihiin markaad iska diiwaangeliso eTN websaydhkan, markaad iska diiwaangeliso adeegyada eTN adoo adeegsanaya websaydhkan, markaad isticmaaleyso alaabada ama adeegyada eTN adoo adeegsanaya websaydhka, markaad booqato websaydhada eTN ama websaydhada shuraakada gaarka ah eTN, iyo markaad gasho dallacsiinta ku saleysan internetka ama xaaqiyadaha ay maalgeliso ama maamusho eTN.
Markaad iska diiwaangeliso degelkeenna, waxaan ku weydiisaneynaa oo aan uruurineynaa macluumaadka sida magacaaga, cinwaanka iimaylkaaga, zip zip, iyo warshadahaaga. Alaabooyinka iyo adeegyada qaarkood waxaan sidoo kale weydiisan karnaa cinwaankaaga iyo macluumaadka adiga kugu saabsan ama hantidaada ganacsi ama dakhligaaga. Mar alla markii aad iska diiwaangeliso eTN oo aad ka soo gasho adeegyadayada, adigu aqoonsi naguma lihid.
Isticmaalayaasha waxaa laga yaabaa inay doortaan inay kaqeybqaataan noocyo kala duwan oo eTN e-waraaqo ah (adeegyo emayl ah), oo ka bilaabma wararka maalinlaha ah ee alaab-qeybiyeyaasha kulkulul. eTN waxay ururisaa macluumaadka shakhsiga ah ee laxiriira diiwaangelinta iyo adeegsiga adeegyadaas.
Isticmaalayaasha ayaa dooran kara inay kaqeyb galaan dallacaadaha iyo / ama tartamada xayeysiinta ah ee eTN ay sameyso waqti ka waqti ayagoo matalaya macaamiishooda. eTN waxay uruurisaa macluumaadka shakhsiga ah ee laxiriira diiwaangelinta isticmaalaha iyo kaqeybgalka dallacsiinta iyo tartamada noocaas ah.
Barnaamijyada Waxbarashada iyo Siminaaro
Isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay kaqeybqaataan barnaamijyada waxbarasho iyo siminaaro ay eTN qabato waqti ka waqti. eTN waxay uruurisaa macluumaadka shakhsiga ah ee laxiriira diiwaangelinta isticmaalaha iyo kaqeybgalka barnaamijyada noocan ah.
“Kukiyada” waa qaybo yar oo macluumaad ah oo uu ku keydiyo biraawsarkaaga kumbuyuutarkaaga darawgiisa adag. eTN ama xayaysiiyayaasheeda ayaa u soo diri kara cookie-ka kombiyuutarkaaga adoo adeegsanaya biraawsarkaaga. eTN waxay isticmaashaa cookies si ay ula socoto codsiyada bogga iyo mudada booqashada isticmaale kasta iyo isticmaalka cookies waxay noo ogolaaneysaa inaan siino biraawsarka adeegsadaha macluumaadka loogu talagalay doorbidaha booqdaha iyo baahidiisa iyo sidoo kale inaan u fududeyno booqashooyinka isticmaalaha boggeena. Waad dooran kartaa inaad aqbasho kukiyada adoo beddelaya dejimaha biraawsarkaaga. Waad dib u dejin kartaa biraawsarkaaga si aad u diiddo dhammaan cookies-ka ama u oggolaato biraawsarkaaga inuu ku tuso markii cookie loo dirayo. Haddii aad dooratid inaadan aqbalin cookies, khibradaada websaydhkayada iyo websaydhada kale way yaraan kartaa sifooyinka qaarna uma shaqeyn karaan sidii loogu talagalay.
eTN waxay si otomaatig ah u heshaa una diiwaangelisaa macluumaadka ku jira diiwaankeena server-ka biraawsarkaaga, oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP, macluumaadka cookie eTN, iyo bogga aad codsato. eTN waxay u isticmaashaa macluumaadkan inay ka caawiso baaritaanka dhibaatooyinka server-yadayada, ee nidaamka maamulka, iyo inaan baaro taraafikada degelkeena wadar ahaan. Macluumaadka waxaa laga yaabaa in la ururiyo loona isticmaalo hagaajinta waxyaabaha ku jira boggeena Web-ka iyo in loo habeeyo waxyaabaha iyo / ama qaabeynta isticmaale kasta.
Haddii aad wax ka iibsaneyso websaydhka eTN, waxaan u baahanahay inaan ogaanno macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo sida magacaaga, cinwaanka iimaylka, cinwaanka boostada, lambarka kaarka deynta, iyo taariikhda uu dhacayo. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan socodsiino oo aan fulino amarkaaga isla markaana aan kugula socodsiino xaalada amarkaaga. Macluumaadkan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa eTN si ay kuu ogeysiiso badeecooyinka iyo adeegyada la xiriira. Macluumaadka kaarka amaahda lama wadaagi doono ama looma iibin doono cid saddexaad oo aan lala xiriirin ujeeddo kasta iyadoon lagaa helin rukhsad deg deg ah, marka laga reebo inay lagama maarmaan tahay in laga shaqeeyo macaamilka.
Haddii aad doorato inaad na siiso macluumaad shaqsiyeed, waxaan ugu horreyn u adeegsannaa inaan ku gaarsiino adeegga aad codsatay. eTN waxay u isticmaali kartaa macluumaadka shakhsiyeed siyaabo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
o eTN waxay adeegsan kartaa macluumaadka shakhsiga ah ee laga soo ururiyey websaydhkeeda si ay ugu dirto dallacsiinta emaylka bartilmaameedka iyaga oo ka wakiil ah xayeysiiyayaasheeda iyo la-hawlgalayaasha warshadaha.
o eTN waxay isku dari kartaa macluumaadka adiga kugu saabsan ee aan ka hayno macluumaadka aan ka helno la-hawlgalayaasha ganacsiga ama shirkadaha kale si aan si wanaagsan ugu gaarsiino alaabooyinka iyo adeegyada laga yaabo inay adiga dan kuu yihiin adiga iyo adiga.
o eTN waxaa laga yaabaa inay u adeegsato macluumaadka shakhsi ahaaneed si ay ula xiriirto isticmaaleyaasha ku saabsan cusbooneysiinta rukhsadaha adeegyada iyo alaabada eTN.
o eTN waxay adeegsan kartaa macluumaad shaqsi ahaan lagu aqoonsan karo si ay ugu dirto ogeysiiska badeecadaha iyo adeegyada eTN ama la-hawlgalayaashayada qaababka sida emaylka iyo / ama boostada.
o Haddii aad bixiso macluumaad maaliyadeed, waxaan u adeegsanaa macluumaadkaas ugu horreyn si aan u xaqiijino amaahdaada oo aan u ururino lacag bixinta iibsashadaada, amarrada, ka-qayb-galkaaga, iwm.
o eTN waxay u diri kartaa ogeysiisyada wax soo saarka ama daabacaadda gaarka ah e-waraaqaha diiwaangelinta khadka tooska ah.
o Haddii aad kaqeybqaadato barnaamijka waxbarashada eTN, aqoon-isweydaarsi, ama barnaamij kale oo xasaasi ah, waxaan kula soo xiriiri karnaa si aan kuu xusuusinno waqtiyada soo socda ama macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadan.
o eTN marmar waxay sameysaa macmiil iyo / ama sahan isticmaale si sifiican loogu bartilmaameedsado waxyaabaha aan kaheleyno dhagaystayaasheena. Macluumaadka isku-darka ah ee la ururiyey waxaa mararka qaarkood lala wadaagayaa xayeysiiyayaasheena, hase yeeshe, ma la wadaagi doonno macluumaad gaar ah shaqsiyeed cid saddexaad.
o eTN waxay ka shaqeysaa degello dhowr ah oo muujinaya waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo adeegyada la xiriira safarka. eTN waxay la wadaagi kartaa macluumaadka shakhsiga ah ee laga soo ururiyey isticmaaleyaasha websaydhadeeda gudaha degelladaan si ay si wanaagsan ugu adeegto adeegsadayaasheeda
eTN waxay leedahay badeecooyin iyo adeegyo badan sidaa darteedna e-mayllo badan iyo liisaska dallacsiinta. Iyada oo lagu dadaalayo in loo oggolaado dadka isticmaala inay u qaabeeyaan kaqeybgalkooda adeegyada eTN iyo dallacsiinta, eTN waxay siisaa dadka isticmaala awood ay ku doortaan liisas gaar ah ama alaabooyin xiiso leh iyo ikhtiyaarrada ka bixitaanku waa wax soo saar iyo adeegsi / liis gaar ah. Dhammaan dhiirrigelinta emayllada ee laga soo diro eTN waxay bixiyaan xiriir-ka-bixid xagga hoose ah ee emaylka iyadoo la raacayo taas oo adeegsadayaashu ka bixi karaan alaabooyin iyo dallacsiinno gaar ah Haddii aad hesho mid ka mid ah emaylladan oo aad rabto inaad ka baxdo fadlan raac tilmaamaha lagu siiyay emayl kasta ama xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Waqti ka waqti waxaan u adeegsan karnaa macluumaadka macmiilka adeegsi cusub, oo aan la filayn oo aan horay loogu soo bandhigin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Haddii ku-dhaqanka macluumaadkayagu isbeddelo waqti mustaqbalka waxaan ku dhejin doonnaa isbeddelada siyaasadeed degelkeenna.
Wadaagista Macluumaadka Lagu Uruuriyay Dhinacyada Saddexaad
Guud ahaan, eTN ma kiraysato, ma iibiso, ama lama wadaagto macluumaadkaaga shaqsiyeed ee adiga kugu saabsan dadka kale ama shirkadaha aan la xiriirin marka laga reebo inay bixiyaan alaab ama adeegyo aad codsatay, markaan helno rukhsaddaada, ama xaaladaha soo socda:
o Waxaan u siineynaa macluumaadka shakhsiyadeed ee ku saabsan isticmaaleyaasheena wada-hawlgalayaasha lagu kalsoon yahay iyo kuwa wax iibiya ee ku shaqeeya magaca ama eTN hoosta sirta iyo heshiisyada la midka ah ee ka mamnuucaya dhinacyada noocaas ah 'isticmaalka dheeraadka ah ee macluumaadka. Shirkadahaani waxay u isticmaali karaan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed inay ka caawiyaan eTN inay kula soo xiriiraan adiga wixii ku saabsan dalabyada ka yimaada eTN iyo la-hawlgalayaasha suuqgeynta. Si kastaba ha noqotee, shirkadahaani ma lahan xuquuq madax-bannaan oo ay u adeegsadaan ama u wadaagaan macluumaadkan.
o Markaad iska diiwaangeliso barnaamij waxbarasho, tartan, ama dallacsiin kale oo uu maalgeliyo dhinac saddexaad, qofka saddexaad ayaa la siin doonaa macluumaad aqoonsi shaqsiyeed haddii aan si kale loogu dhajin ee la xidhiidha dallacaadda.
o eTN waxaa laga yaabaa in waqti ka waqti ay la wadaagto macluumaadka shakhsi ahaaneed sida cinwaannada emaylka ee dhinacyada saddexaad ee kalsoonida leh ee keena macluumaadka ay u badan tahay inay daneynayaan adeegsadaha isla markaana ay ku xiran tahay waajibaadka ka-saarista qaybta saddexaad.
o Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka shakhsi ahaaneed halka aan ku kalsoonahay caqiidada wanaagsan in tallaabada noocaas ah ay lagama maarmaan u tahay u hoggaansamida dacwadda garsoorka, amar maxkamadeed, ama habraac sharciyeed loo adeegsaday eTN, ama in la dhiso ama lagu dhaqmo xuquuqdeena sharci ama aan ka difaacno sheegashooyinka sharciga ah.
o Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka noocaas ah halka aan ku kalsoonahay caqiidada wanaagsan in ay lagama maarmaan tahay si loo baaro (ama looga caawiyo baaritaanka), looga hortago, ama loo qaado talaabo la xiriirta howlaha sharci darrada ah, tuhunka khiyaanada, xaaladaha ku lug leh khataraha amniga jirka. qof kasta, ku xadgudubka shuruudaha isticmaalka eTN, ama haddii kale sharcigu u baahan yahay.
o Haddii eTN ay la wareegto ama ku milmaan shirkad kale, macluumaadkaaga kugu saabsan waxaan u wareejin doonnaa shirkaddan kale ee la xiriirta soo iibsiga ama ku biirista.
Kooxaha falanqaynta emaylka ayaa loo heli karaa adeegsadeyaasha websaydhyada qaarkood. Ka qaybgalayaashu waa inay ogaadaan in macluumaadka lagu soo bandhigay liisaskan wada-hadalka ah in loo wada heli karo dhammaan xubnaha oo sidaasna ku noqonaya macluumaadka dadweynaha. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad taxaddar muujiso markii aad go'aansaneysid inaad shaaca ka qaaddo wixii macluumaad shakhsi ah ee kooxaha wadahadalka noocaas ah.
Websaydhkani wuxuu qaadaa taxaddarro ganacsi oo macquul ah si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed. Markii aan wareejineyno oo aan helno noocyo macluumaad xasaasi ah sida kaarka deynta iyo macluumaadka lacag bixinta, waxaan dib ugu toosineynaa isticmaaleyaasha server-yada heerka waxsoosaarka SSL (Secure Socket Layer). Natiijo ahaan, macluumaadka xasaasiga ah ee aad u soo gudbiso degelkeena sida kaarka deynta iyo macluumaadka lacag bixinta waxaa si ammaan ah loogu gudbiyaa internetka.
eTN mas'uul kama aha xadgudub kasta oo amniga ah ama ficil kasta oo ay sameeyaan dhinacyada saddexaad ee hela macluumaadka. eTN sidoo kale waxay kuxirantahay boggag kaladuwan oo kaladuwan waxaana kujira xayeysiinta dhinacyada saddexaad. Annagu mas'uul kama nihin siyaasaddooda gaarka ah ama sida ay ula dhaqmaan macluumaadka ku saabsan isticmaalayaashooda.
Ku Saabsan Asturnaanta Carruurta
Websaydhkan eTN looguma talagalin inay adeegsadaan carruurta eTN-na iyada oo aan ogayn kama uruuriso macluumaadka carruurta. Waa inaad 18 jir noqotid si aad uhesho ama u adeegsato degelkan.
Cusboonaysii / Beddel Xogtaada
Si aad u cusbooneysiiso cinwaanka emaylkaaga ama aad u beddesho dookhaaga emaylka fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
eTN waxay xaq u leedahay, wakhti kasta iyo ogeysiis la'aan, in lagu daro, la beddelo, la cusbooneysiiyo ama wax laga beddelo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, iyadoo si fudud loogu dhajinayo isbeddelka noocaas ah, cusbooneysiinta ama wax ka beddelka websaydhka. Isbeddel kasta oo noocaas ah, cusbooneysiinta ama wax ka beddelka ayaa isla markaaba ku dhaqmi doona marka la soo galo websaydhka. Isticmaalayaasha waxaa lagu wargalin doonaa isbeddelada ku yimaada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyadoo loo marayo xiriirka "cusbooneysiiyay" ee bogga eTN.
Maxaan Kale Oo Aan Ka Ogaadaa Qarsoodigeyga Marka Aan Kujiro internetka?
Websaydhka eTN wuxuu ka kooban yahay iskuxirayaal badan oo bogagga kale ah. Websaytka eTN waxa kale oo ku jira xayaysiisyada dhinacyada saddexaad. eTN mas'uul kama aha dhaqamada asturnaanta ama waxyaabaha ku jira websaydhada saddexaad ama xayeysiistayaasha. eTN lama wadaagto mid ka mid ah macluumaadka shakhsiga ah ee shakhsiyadeed ee aad siiso eTN websaydhyada ay eTN isku xirto, marka laga reebo sida lagu sheegay meelo kale oo ka mid ah Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, in kasta oo eTN ay la wadaagi karto xogta wadarta websaydhyada noocan oo kale ah (sida imisa qof ayaa isticmaala boggayaga).
Fadlan ka hubi goobahaas saddexaad si aad u go'aamiso siyaasaddooda gaarka ah. Markii eTN ay ku darto macluumaadka dhinac saddexaad mid ka mid ah bogagga eTN, eTN waxay adeegsan doontaa dadaal macquul ah si ay ula talinayso isticmaaleyaasheena inay ka baxeen websaydh ay ku shaqeyso eTN oo ay gelayaan websaydh saddexaad oo ay maamusho. Macaamiisha / isticmaaleyaashu waa inay akhriyaan oo fahmaan siyaasad kasta oo asturnaan ah oo lagu xusay dhammaan websaydhada dhinac saddexaad.
Fadlan maskaxda ku hay in mar kasta oo aad si ikhtiyaari ah u soo bandhigto macluumaadkaaga shakhsiyeed khadka tooska ah - tusaale ahaan emayl, liisaska doodda, ama meelo kale - macluumaadkaas ayaa la soo ururin karaa oo ay isticmaali karaan dadka kale. Marka la soo koobo, haddii aad ku dhajiso macluumaadka shakhsiga ah khadka tooska ah ee ay u furan tahay dadweynaha, waxaad heli kartaa farriimo aan loo baahnayn oo ka yimaada dhinacyada kale taas beddelkeeda.
Ugu dambeyntiina, adiga ayaa keliya masuul ka ah ilaalinta sirta macluumaadkaaga shaqsiyeed. Fadlan taxaddar oo mas'uul noqo markasta oo aad internetka ku jirto.
Iyadoo la raacayo bixinta sharciga Kaalifoorniya, degane Kaalifoorniya oo macluumaad shakhsiyadeed siisay meherad ay isaga / iyadu la sameeyeen xiriir ganacsi oo shaqsiyeed, qoys, ama ujeedo qoys ("Macaamiisha California") waxay xaq u leedahay inay codsato macluumaad ku saabsan haddii ganacsigu wuxuu shaaca ka qaaday macluumaadka shakhsiyeed cid kasta oo saddexaad ujeeddooyinka suuq-geynta tooska ah ee dhinacyada saddexaad. Haddii kale, sharcigu wuxuu siinayaa haddii shirkaddu leedahay siyaasad sir ah oo siinaysa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah ama ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah u adeegsiga macluumaadkaaga shakhsiyeed ee dhinacyada saddexaad ee ujeeddooyinka suuqgeynta, shirkaddu waxay kaa siin kartaa macluumaad ku saabsan sida loo jimicsado ikhtiyaariyada xulashadaada shaacinta.
Sababtoo ah Boggan waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo ganacsi ahaan, ganacsi ahaan, qodobkaan sharciga Kaalifoorniya ma khuseyn doono, xaaladaha badankood, macluumaadka la soo ururiyay.
Ilaa iyo inta uu degganaha Kaalifoorniya u adeegsanayo degelkan shaqsi ahaan, qoyskiisa, ama ujeeddooyinkiisa guri uu raadinayo macluumaad daboolaya sharciga, Boggan wuxuu uqalmaa ikhtiyaarka kale. Sida lagu sheegay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, isticmaalayaasha Boggu waxay ka bixi karaan ama dooran karaan isticmaalka macluumaadkaaga shakhsiyeed ee dhinacyada saddexaad. Sidaa darteed, looma baahna inaan sii wadno ama shaaca ka qaadno liiska dhinacyada saddexaad ee helay macluumaadkaaga shakhsiga ah intii lagu jiray sanadkii ka horreeyay ujeedooyin suuq-geyn ah. Si looga hortago bixinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si loogu isticmaalo suuq-geyn toos ah oo dhinac saddexaad ah, ha u-adeegsan adeegsiga noocan oo kale ah marka aad bixiso macluumaad shakhsiyeed Bogga. Fadlan la soco in markasta oo aad doorato inaad ka hesho isgaarsiinta mustaqbalka dhinac saddexaad, macluumaadkaaga wuxuu ku xirnaan doonaa siyaasadda asturnaanta xisbiga saddexaad. Haddii aad goor dambe go'aansato inaadan rabin in qolada saddexaad adeegsato macluumaadkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad si toos ah ula xiriirto kooxda saddexaad, maadaama aynaan awood u lahayn sida ay qaybaha saddexaad u isticmaalaan macluumaadka. Waa inaad had iyo jeer dib u eegis ku sameysaa siyaasada asturnaanta ee xisbi kasta oo ururiya macluumaadkaaga si loo go'aamiyo sida hay'adaasi u maareyn doonto macluumaadkaaga.
Deggeneyaasha Kaalifoorniya ee uga faa'iideysta degelkan ujeeddooyin shaqsiyeed, qoys, ama reer ayaa laga yaabaa inay weydiistaan ​​macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u hoggaansamida sharcigan emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay] Waa inaad gelisaa bayaanka “Xuquuqdaada Asturnaanta Kalifoorniya” mawduuca emaylkaaga. Fadlan ogow in kaliya nalooga baahan yahay inaan ka jawaabno hal codsi macaamil kasta sanad walba, loomana baahna inaan ka jawaabno codsiyada la sameeyay ee aan ahayn cinwaanka emaylkan.
Adiga oo adeegsanaya websaydhkayaga, waxaad oggolaatay ururinta iyo adeegsiga macluumaadka eTN sida ku cad siyaasaddan. Fadlan sidoo kale ogow in isticmaalkaaga websaydhka ay xukumaan eTN Shuruudaha iyo Xaaladaha. Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ama Shuruudaha iyo Xaaladaha, fadlan ha isticmaalin websaydhka, alaabada iyo / ama adeegyada.
Fadlan u soo dir wixii su'aalo ah ee ku saabsan eTN ee Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah [emailka waa la ilaaliyay]
Xusuusin: Smush la macaamil ma leh isticmaaleyaasha dhamaadka boggaaga. Xulashada kaliya ee wax soo gelinta ee Smush ay leedahay ayaa ah ku qoritaanka wargeys ee maamulayaasha goobta kaliya. Haddii aad jeceshahay inaad ku ogeysiiso isticmaaleyaashaada arrintaan nidaamkaaga gaarka ah, waxaad isticmaali kartaa macluumaadka hoose.
Smush wuxuu sawirro u diraa server-yada WPMU DEV si loogu hagaajiyo isticmaalka webka. Tan waxaa ka mid ah wareejinta xogta EXIF. Xogta EXIF ​​ama waa la jari doonaa ama waa lagu celin doonaa sida ay tahay. Laguma kaydiyey barnaamijyada WPMU DEV.
Smush wuxuu adeegsadaa adeegga iimaylka saddexaad (Drip) si uu ugu diro emayl macluumaad ah maamulaha goobta. Cinwaanka emaylka ee maamulaha ayaa loo diraa Drip oo buskud ayaa ay dejiso adeegga. Kaliya macluumaadka maamulaha waxaa ururiya Drip.